GOOBAHA DAGAALKA: Saddex Meelood Oo Uu Dagaalka Ugu Weyn Ku Dhexmari Doono Man United vs Liverpool Kulanka Galabta Iyo Xiddigaha Ku Lug-yeelan Doona - Cadalool.com
GOOBAHA DAGAALKA: Saddex Meelood Oo Uu Dagaalka Ugu Weyn Ku Dhexmari Doono Man United vs Liverpool Kulanka Galabta Iyo Xiddigaha Ku Lug-yeelan Doona
Manchester United ayaa soo dhaweyneysa Liverpool kulan muhim ah oo ka tirsan Premier League galabta saacada geeska Afrika marka ay tahay 5:05pm.
Ciyaartan oo ah mid si weyn looga sugayo guud ahaan caalamka, ayaa waxa ku loollami doona tatababare Ole Gunnar Solskjaer oo wiilashiisa dib u abaabushay markii uu shaqada ka beddelay Jose Mourinho, isla markaana 13 ciyaarood oo uu hoggaamiyey laga adkaaday hal kulan oo kaliya iyo Jurgen Klopp oo kooxdiisa ay hoggaanka haysay illaa xilligii ciidda Masiixiga ee December, waqtigaas oo Man City ay hoggaanka si fudud u dhiibtay kaddib kulamo is xigay oo guul-darrooyin ah.
Paul Pogba oo ah laacibka hoggaamiya khadka dhexe iyo niyadda kooxdaba ayaa mar kale kusoo bilaaban doona kulankan, halka Liverpool ay kusoo geli doonto saddelxeydeedii afka hore iyo niyad-dhisihii khadka difaaca ee Virgil van Dink oo kusoo laaban doona kaddib markii uu maqnaa ciyaartii Bayern Munich.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex meelood oo uu dagaalka ugu weyn ku dhex mari doono labada kooxood, halkaas oo laga go’aamin doono midkooda guusha la hoyan doonta.
Mo Salah vs Victor Lindelof
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah oo dhaliiyey 17 gool oo horyaalka ah ayaa ka hor tegi doona Manchester United, iyadoo ay garbihiisa taagan yihiin Roberto Firmino iyo Sadio Mane.
Salah ayaa kusoo bilaaban kara laba boos oo kala ah, inuu sagaal buuxa noqdo iyo inuu baasha midig kasoo galo, halkaas oo ah meeshii uu xili ciyaareedkii hore ka dhaliyey goolasha badan.
Sadio Mane ayaa dhinaca bidix kasoo geli doono, halka uu dhexda horena u taagnaan doono Roberto Firmino oo sida uu caanka ku yahay kubbado badan ku habi doona MO Salah.
Halka uu Mo Salah ka yahay hoggaamiyaha weerarka, waxa United ay u xilsaari doontaa qabashadiisa difaacyahanka Lindelof oo u dhashay waddanka Sweden, isla markaana muujiyey inuu yahay aasaasi iyo rukun adag oo lagu hallayn karo shaqo kasta oo adag iyo ciyaartoy kasta oo wanaagsan oo uu awood u yeelan karo inuu qabto.
Luke Shaw ayaa noqon doona midka koowaad ee ay is haleelaan Mo Salah, laakiin haddii uu ka baxsado, waxay si toos ah iskaga hor iman doonaan Lindelof.
Haddii uu Mohamed Salah ku guuleysto inuu jabiyo Luke Shaw iyo Lindelof, waxa uu gaadhi karaa goolka uu ku jiro David de Gea oo raadinaya in goolkiisa uu nadiif ka dhigo kulankii 100aad ee horyaalka Premier League.